Reebichaa fi Hidhaa Magaalaalee Baddallee fi Bishooftuutti Hammaatan Jedhaman
Mormii barattootaa, Adaamaa, Oromiyaa (Faayilii)
Godina Iluu Abba Boor magaalaa Baddallee fi nannootti barattotaa fi jiraattoota irratti reebichaa fi hidhaan daran hammaate jechuun maddeen ibsanii jiru.Kibxata darbe Polisoonni Federaalaa Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Baddalle seenuun “Namnii Mana Barnootaatti Dhagaa Darbate” eenyu jechuun aara himiimaansu darbatanii barattoota 81 ol ta’aantu ukkamamanii Hospitaala seenuun ibsamee jira. kanneen keessaa 41 amma iyyu mana yaalaa keessa akka jiranii fi kanneen lubbuuf haala sodaachisaa keessa jiran jiru jedhu.Itti anaa bulchaan magaalaa Baddallee Obbo Girmaa Terrafaa polisiin mooraa mana barumsaa seene hin jiru, barataan midhamee hospitaala seene hin jiru jedhan. Garuu kannen polisii harkatti Dullaa argan ofumaa sodaatanii kukkufan boodas hospitaalatti wal’anamanii ba’an 6 ta’u jedhu.
Garuu kan qabamanii gara magaalaa Baddaleetti geessaman jiru jedhu. Bulchaan aanaa Baddallee Obbo Araggaa Shiguxee walgahii irran jira booda natti deebi’aa jechuun bilbila cufan. Gama kaaniin magaalaa Bishooftuu fi handaara magaalaatti reebichaa fi hidhaan hammaate jedhu jiraatonni fi barattonni. Angawoonni garu ni haalan.